Home Wararka Puntland oo diiday in dadkii la soo masaafuriyay ku nagaadaan deegaanadooda
Puntland oo diiday in dadkii la soo masaafuriyay ku nagaadaan deegaanadooda
Dowlad Goboleedka Puntland oo maanta ka hadashay Dadkii ay shalay Somaliland kasoo masaafurisay Magaalada Laascaanood ee Xarunta Gobolka Sool, kuwaasi oo kasii jeeda Koonfurta Soomaaliya gaar ahaan Gobolada Baay iyo Bakool.
Puntland oo sheegtay inay fududeynayaan safarka dadkii laga soo masaafuriyay Somaliland laakiin ayan marnaba u ogolaanaynin in ay ku sii nagaadaan degnano ka tirsan Puntland. Wasiirka Arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in duleedka Magaalada Gaalkacyo ay kusoo dhaweeyeen dad Soomaaliyeed oo farabadan oo laga soo masaafuriyey Somaliland.
Inkastaa oo ayan si toos ah u sheegin hadana Puntland ayaan doonaynin in dadka laga soo tarxiilay Somaliland ay ku nagaadaan deeganada Puntland. Wasiir Dhabancad ayaa sheegay in tirada dadka soo ay dhaweeyeen ay gaareyso 758 qof oo isugu jira Haween, dhalinyaro, Carruur iyo Odayaal, ayna gurmad u sameeyeen dadkaas oo kasoo jeeda Koonfurta Soomaaliya. Waxa uuna sheegay in ay sida ugu dhaqasiyaha badan leh ay loogu sii gudbin doono Koonfurta Soomaaliya.
“Puntland waxay bannaanka Magaalada Gaalkacyo ku soo dhaweysay dad Soomaaliyeed oo gaaraya 758 (tiro horudhac ah) Dadkaan oo isugu jira haween, caruur iyo rag intaba ayaa 2 October 2021 waxaa Maamulka Somaliland ka soo saareen Laascaanood” ayuu yiri Wasiirka Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad.
Gaadiid nooca xamuulka qaado ah oo siday dadka ay Somaliland kasoo masaafurisay Laascaanood ayaa saakay gaaray duleedka Gaalkacyo, waxaana dadkaas loo sameeyay gurmad, iyagoona la siiyay cunto iyo daawooyin, isla markaana ka mahadceliyay.